जेष्ठ नागरिकभन्दा पहिला पत्रकारले कसरी पाउने भए कोरोना खोप? :: Setopati
जेष्ठ नागरिकभन्दा पहिला पत्रकारले कसरी पाउने भए कोरोना खोप?
विवेक राई काठमाडौं, माघ २५
सरकारले प्राथमिकता मिचेर जेष्ठ नागरिकभन्दा पहिले पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप दिने भएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले सोमबारबाट पत्रकार, कूटनीतिक नियोग र सयुक्त राष्ट्र संघका कर्मचारीलाई खोप दिने जानकारी दिए।
सरकारले तय गरेको खोप पाउने प्राथमिकताको सूचीमा पत्रकार, कूटनीतिक नियोग र सयुक्ता राष्ट्र संघका कर्मचारीभन्दा जेष्ठ नागरिक माथि छन्। सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र फ्रन्टलाइनमा खटिने कर्मचारीलाई खोप लगाउने र दोस्रो चरणमा ५५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरूलाई खोप दिने भनेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले उक्त प्राथमिकतालाई मिचेर पत्रकार, कूटनीतिक नियोग र सयुक्त राष्ट्र संघका कर्मचारीलाई खोप दिने तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले झन्डै १९ हजार त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोप दिने जनाएको छ। त्यसका लागि उपत्यकाका चार वटा अस्पताल तोकिएको छ।
डा. गौतमका अनुसार पत्रकारले सिभिल अस्पताल, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले टिचिङ र गंगालाल हृदयरोग अस्पताल र सयुक्त राष्ट्र संघका कर्मचारीले पाटन अस्पतालमा खोप लगाउन सक्छन्।
सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरैले सरकारले पत्रकारहरूलाई भन्दा सुरूमा प्राथमिकताअनुसार बढी जोखिममा रहेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई खोप दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
खोप शाखा प्रमुख गौतमले जेष्ठ नागरिकमा जाँदा समूदायमै जानुपर्ने र ठूलो मात्रामा खोप आवश्यकता पर्ने हुनाले अहिले खोपको उपलब्धता हेरी निश्चित समूहमा जानु परेको बताए।
'समुदायमा जाँदा अहिले भएको खोपको मात्राले पुग्दैन। एउटा प्रदेश वा कुनै ठाउँ मात्र छनोट गरेर पनि हुँदैन। देशव्यापी जानुपर्ने हुन्छ। अर्को खोप आउनुबित्तिकै हामी समुदायमा जान्छौं र प्राथमिकता अनुसार जेष्ठ नागरिकदेखि सबैलाई लगाउँछौं,' उनले भने।
पत्रकारहरूको हकमा भने सम्बन्धित निकायले पनि आग्रह गरेको भन्दै खोपको उपलब्धता हेरेर पत्रकारलाई लगाउने निर्णय भएको गौतम बताउँछन्।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जिल्ला-जिल्लाबाट तथ्यांक मगाएर १३ हजार बढी पत्रकारलाई खोप लगाउन सरकारसँग महासंघले आग्रह गरेको जानकारी दिए। सोही अनुसार सरकारले सूचना विभागको कार्ड देखाएर खोप लगाउन सकिने जनाएको छ। तर सूचना विभागको कार्ड नभएका पत्रकारलाई पनि खोप लगाउन पाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
'पत्रकारहरू पनि अग्रपंक्तिमा खटेर काम गरिरहेका छन्। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाउने भनिएकोले हामीले पत्रकारलाई खोप लगाउन भनेका थिएनौं। पहिलो चरण सकिएर दोस्रो चरण सुरू भएकोले अब पत्रकारलाई पनि खोप लगाउनुपर्छ भन्ने महासंघको भनाइ हो। सूचना विभागका कार्ड नभएका पत्रकारलाई पनि खोप लगाउनुपर्छ,' आचार्यले भने।
कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको हकमा भने उनले बाहिरी देशमा पनि नेपालीहरूले खोप पाउने अवस्था रहेकाले त्यहीँ अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यहाँ पनि उपलब्ध गराउने हिसाबले ती समूहलाई खोप दिन लागेको जनाए।
खोप सुरूमा क-कसलाई दिने भनेर प्राथमिकता तय गरिएको भए पनि खोपको उलब्धता र जोखिमको अवस्था हेरेर प्राथमिकतामा केही हेरफेर हुन गएको गौतम बताउँछन्।
उनले भने, 'पहिले पनि कैदी र वृद्धाश्रममा सुरूमा खोप दिने भनिएको थिएन तर पछि जेल र वृद्धाश्रममा संक्रमण फैलियो भने धेरै क्षति हुन्छ भनेर ती समूहलाई पहिले लगायौं।'
सरकारले पहिलो चरणमा एक लाख ८४ हजार ८५७ जनालाई खोप लगाएको छ।
शनिबार सम्पन्न पहिलो खोप अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी, एन्बुलेन्स चालक, शव व्यवस्थापनमा खटिएका, सरसफाइ कर्मचारी, कैदी, वृद्धाश्रमका मानिसहरूले खोप लगाएका छन्। सरकारले भारतबाट अनुदानमा पाएको १० लाख डोज खोप अहिले नागरिकलाई लगाइरहेको छ। झन्डै २ लाख खोप लगाइसकेकोमा अब थप दुई लाख व्यक्तिलाई पुग्ने खोप बाँकी छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २५, २०७७, ०३:५५:००